Cajiib: Daawo sawirro nin shiines ah oo guursday gabar Robot ah#aqriso sababt oo la yaab leh | Xaqiiqonews
Cajiib: Daawo sawirro nin shiines ah oo guursday gabar Robot ah#aqriso sababt oo la yaab leh
Nin Shiinees ah ayaa sameysay haweeney Robot ah oo uu xaas ka dhigtay, kadib markii uu ka daalay inuu raadiyo jaceyl iyo xaas bani’ aadam ah oo uu nolol la wadaago.
Ninkan oo ah injineer qalabka caaqilka ah ayaa lagu magacaabaa Zheng Jiajia, waana 31 sano jir, waxaana la sheegay inuu sidoo kale karaahsaday codsiyadaha waalidkiis oo mar waliba ka doonayay inuu guursado.
Arrintan waxay ku dhalisay Zheng inuu sameys haweeney Robot oo qalab elecronik ah laga sameeyay kadibna uu la aqal galay, taasoo noqotay arrin si weyn looga hadal hayo caalamka.
Gabadha uu guursaday ee uu sameystay ayuu ugu magac daray Yingying, waxaana loo suuradeeyay sida gabar Shiinees ah iyadoo ereyo kooban ku hadai karta. Kadib laba bilood uu haasaawe la wadaagayna wuxuu u soo lebisay sida aroosyada Shiinaha dhaqankoodu yahay, waxaana xaflada arooska oo ka dhacday magalaada Hangzhou kasoo qeyb galay ninkan hooyadiis iyo saaxiibadiis.
Inkastoo aan si sharci ah loo aqoonsan inay xaas yihiin haddana waxay arrintan muujineysaa dhibaatada isu dheelitirka jinsiga ee ka taagan dalka Shiinaha, taasoo la sheegay in 114 qof ee rag ahba ay ku soo beegmeyso 100 haween ah, waxaana ugu wacan siyaasad Shiinaha muddo ku dhaqmayay oo ah in qoys waliba uu yeelan karo hal canug.